काठमाडौं, ११ कात्तिक । बाह्र वर्षपछि निर्माण र निर्देशनमा फर्किएका अशोक शर्मा निर्देशित फिल्म ‘जय भोले’ अहिले दोस्रो सातामा प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनको पहिलो हप्तामा नै लगानी सुरक्षित गरेर नाफातर्फ अगाडि बढेको फिल्मलाई दर्शक र समीक्षकले रुचाएका छन् । फिल्मको ुवर्ड अफ माउथु राम्रो छ ।
दोस्रो सातामा पनि सुखद व्यापार गरिरहेको फिल्म हेर्न शनिबार नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग संयोजक तथा बाबुराम पत्नी हिसिला यमी हल पुगेका छन् । दुईले काठमाडौँ सुनधारास्थित सिभिल मलमा रहेको क्युएफएक्स हलमा फिल्म हेरेका हुन् ।
हलबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले ‘जय भोले’ अपत्यारिलो फिल्म रहेको बताए । उनी भन्छन्, ुमैले धेरै अपेक्षा बोकेर आएको थिइनँ तर हेरिरहँदा फिल्म उत्कृष्ट लाग्यो । यो एउटा सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक फिल्म हो । फिल्मले सन्देश पनि दिएको छ ।ु
नेता भट्टराईले मिडियाकै सामु फोन गरेर निर्देशक शर्मालाई बधाई समेत दिएका थिए । नेतृ यमीले भने नेपाली फिल्मको स्तर वृद्धि भएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । ुमेकिङ, कथावस्तु, कलाकारको अभिनयमा अहिले धेरै प्रगति भएको छु ‘जय भोले’ को तारिफ गर्दै उनी भन्छिन्, ुफिल्म उत्कृष्ट बनेको छ ।ु
प्रदर्शनको पहिलो साता ३ करोड ग्रस कलेक्सन गरेको फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने, सौगात मल्ल, स्वस्तिमा खड्का, बुद्दि तामाङ्ग, सलोन बस्नेतलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । फिल्मको कथा खगेन्द्र स्वयमले लेखेका हुन् । फिल्मले दुई साथी अर्थात् जय र भोलेको कथा वाचन गरेको छ ।